Orinasa mpamatsy varimbazaha China sy mpamatsy | RY AGRI
Mpamafy iray mamafy varimbazaha. Afaka misafidy amin'ny 9 ka hatramin'ny 24 andalana ianao. Ny vokatra dia misy zana-kazo, boaty zezika voa, metatra voa iray, fantsom-panafahana zezika, mpanokatra hady ary kodiarana fitotoana. Ny fanaovana zezika, ny zezika, ny zana-kazo ary ny fanabeazana dia azo vitaina indray mandeha.
Ny masinina dia mora manitsy, matanjaka ary azo ampiasaina hamafy voa amin'ny antony maro samihafa.
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tendron'ny angadinomby na kapila, ny voa dia mitovy amin'ny halalin'izy ireo mba hiantohana ny fitomboan'ny tsimokaretina miaraka. Ireo fitaovana dia azo hamokarana na tsy misy zezika.
· Mamboly vokatra ary zezika miaraka amin'izay
· Vata vy sy boaty masomboly dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, izay tsy hivadika na harafesina.
· Ny fanatanterahana ny famehezana ny bear dia tena tsara, ary tsy mora ny miditra amin'ny vovoka
· Rehefa mamafy dia azo ahitsy ho azy araka ny haavon'ny tany.
· Izy io dia afaka mamita ny asa atao toy ny haavo, ny tatatra, ny zezika, ny famafazana, ny famonoana, ny fandrakofana ny tany ary ny lavaka fandavaka
· Mpanokatra kapila maivana maivana, izay afaka manary, mamoaka ary mamafy amin'ny tany mamerina ny mololo any an-tsaha.
· Ny fitaovana fanapahana dia afaka mampandeha tsara ny milina ao anaty tanimanga.
Ny fomba famonosana ny milina amin'ny ankapobeny dia vy vy, ary ny fomba fitaterana dia voafaritra arakaraka ny habetsaky ny vokatra, matetika amoron-dranomasina, satria lehibe ny haben'ny mpamboly katsaka, raha manana an'ity agents ity ianao dia afaka manatitra ihany koa izahay ny masinina ho an'ny masoivohonao any Shina.
Teo aloha: Mpamboly katsaka
Manaraka: Mpamboly tongolo gasy